Mifanjevo Ao Anatin'ny “Atin'akanjo Maloton'ny Paki” Ny Ara-nofo, Fivavahana Ary Politika
Amerika Avaratra 30 Mey 2015
Nentin'ilay Pakistane metisy Amerikana, Aizzah Fatima, nitety izao karazan-toerana samihafa izao ny fampisehoana an-tsehatra lalaoviny samirery tato anatin'ny taona vitsy lasa. Na dia manafintohina ny sasany aza ny lohatenin'ilay fampisehoany. Lohateniny ny hoe : Atin'akanjo Maloton'ny Paki.
Efa Matin'ny Bala Va Re Ny Hoavin'ny Tanora Ao Venezoela?
Ady & Fifandirana 22 Mey 2015
Ao anatin'ny firenena iray toa an'i Venezoela, izay ny vono olona no lohalaharana miteraka fahafatesana ho an'ny tanora eo anelanelan'ny 10 sy 19 taona, fanantenana toa inona no azo andrandrainan'ireo andian-taranaka hoavy ?
InfoAmazonia : Labôratoara Madinika Hanarahana Maso Ny Rano Ao Tapajos sy Amazônaa
Amerika Latina 20 Mey 2015
Zava-dehibe iankinan'ny aina ny kalitaon'ny rano ho an'ireo mponina ao Santarém, Brezila, manamorona ny Amazôna. Misy fikambanana iray ao an-toerana nandray an-tànana ny 'fanaraha-mason'olon-tsotra' sy ny fanofanana ireo mponina amoron-drano.
Bahanan'ny PayPal Ireo Tolo-bola Ho Fanontàna Ny Tatitr'i Boris Nemtsov Momba Ny Ady Tao Okraina
Okraina 20 Mey 2015
Nampahafantarin'ny PayPal ny ekipan'ny tatitra "Ady.Putin" fa tsy azo ampiasaina ny tolotra mba "hanangonana vola hamatsiana hetsiky ny antoko politika na tanjona politika ao Rosia.”
Nialàn'i Nepal ny #GoHomeIndianMedia, Fa Novàny Hoe #ComeBackIndianBarber
Azia Atsimo 20 Mey 2015
Nojerena ambony ambany hatrany (nohambaniana) ireo mpanety tao Kathmandu. Taorian'ny fifindràmoninafaobe sy ny fikororosin'ny toekarena naterak'ireo horohorontany anefa dia ry zareo ireo no lasa ho isan'ny matianina tena tadiavina indrindra any amin'ny faritra
Ejipta 20 Mey 2015
Amerika Latina 19 Mey 2015
Eoropa Andrefana 19 Mey 2015